ဝတ္ထုဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားနေရသလို စီးမျောသွားမယ့် ရသစာအုပ်(၃)အုပ် – For her myanmar
ဝတ္ထုဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားနေရသလို စီးမျောသွားမယ့် ရသစာအုပ်(၃)အုပ်
Posted on March 15, 2019 June 14, 2019 Author Stella	Comment(0)
နှလုံးသားကို တိုက်ရိုက်ထိမှန်စေတဲ့ အရေးအသားတွေမို့ တသသစွဲကျန်စေမှာပါ 😇
ဒီတစ်ပတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာ ဘယ်မှမသွားဘူး အေးအေးဆေးဆေး အိမ်မှာပဲနေမယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် စာအုပ်အညွှန်းလေးအလှည့် ပြန်ရောက်လာပါပြီနော်။ အခု Stella ညွှန်းပေးမယ့် စာအုပ်လေးတွေက ဖတ်ပြီးရင် တသသဖြစ်နေရစေမယ့် လက်ရာတွေမို့ ဖုန်းလေးတွေ နှစ်ရက်လောက်ချပြီး စာအုပ်ကမ္ဘာထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ကြပါစို့…
(၁) ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ – မင်းလူ
ဒီစာအုပ်ကတော့ ဆရာမင်းလူရဲ့ လက်ရာတွေထဲမှာ Stella အတွက် ရင်ထဲအထိဆုံးပါ။ ငယ်ဘဝက နာကြည်းချက်တွေကြောင့် ဘဝကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ခင်ခိုင် နဲ့ လူရိုးလူဖြောင့် ခပ်အေးအေးနေချင်သူ ငြိမ်းမောင် တို့လင်မယား။ ခင်ခိုင်က နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားခါနီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာလို့ ပညာတော်သင်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။ မွေးလာတဲ့ သားမောင်ကလည်း ဥာဏ်ရည်မမီတဲ့ ကလေးဖြစ်နေပြန်တယ်။ သူတို့မိသားစုကြားမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာမလဲ ၊ ခင်ခိုင်ကရော သားမောင်အတွက် သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အဆုံးရှုံးခံမှာလား ၊ ဥာဏ်ရည်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုပျိုးထောင်မှာလဲ စတာတွေကို ဆရာမင်းလူက “ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ” မှာ ကလောင်သားထက်ထက်နဲ့ သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။
(၂) မအိမ်ကံ – ခင်ခင်ထူး
စဖတ်ထဲက Stella လက်ကမချနိုင်အောင် စွဲခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါ။ အခုထက်ထိလည်း ဖတ်တိုင်းကြိုက်တုန်းပါပဲ။ စာအုပ်က အနည်းငယ်ထူတာမို့ စာဖတ်နှေးတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် အချိန်ယူဖတ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဖက်စိမ်းကွမ်းတောင်ကိုင်ဖြစ်ချင်လွန်းသူ ဇောင်ချမ်းကုန်းရွာက မိန်းမချော မိန်းမလှ မအိမ်ကံရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ဒီဝတ္ထုမှာဖတ်ရမှာပါ။ ချစ်စရာကျေးရွာဓလေ့တွေ၊ ရှေးက ကွမ်းတောင်ကိုင်ရွေးတဲ့အခါမှာ ထားရှိတဲ့ စံတွေ၊ ဂျပန်ခေတ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာနိုင်မယ့် ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ပန်းစကား – မစန္ဒာ
ကြွေ…တစ်ပတ်လျှိုဆံထုံး၊ မာနရိပ်ကင်းတဲ့ မျက်ဝန်းညိုညို၊ အေးချမ်းငြိမ်သက်တဲ့အသွင်နဲ့ ကြွေ။ သူ(မ)ဘဝရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ခင်တွယ်စရာ ကိုလေး။ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ကြွေ။ ဒီ ကြွေဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကိုမှ ချစ်မိတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မောင်မောင်။ ကြွေ့ဘဝမှာ ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေလဲ၊ မောင်မောင်ကကော ကြွေ့ကို အိမ်မက်ဆိုးတွေကနေ ကယ်တင်နိုင်မှာလား၊ ကိုလေးဆိုတာကကော ဘယ်သူလဲ ? ရယ်မောစရာတွေရော ရင်မောစရာတွေရောကိုပါ ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ဟန်အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးထားတာဖြစ်လို့ “ပန်းစကား” ကို ယောင်းတို့အကြိုက်တွေ့မှာပါ။
Related article >>> ဇာတ်လမ်းကောင်း ကြိုက်သူတွေအတွက် “လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ” ဝတ္ထု
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ဒီတစ်ပတ်အတွက် နှစ်သက်ရာစာအုပ်လေးတွေ ရွေးပြီးဖတ်လို့ရလောက်ပြီပေါ့နော်။ Stella ရွေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေက Stella ကိုယ်တိုင်ဘယ်နှခေါက်ဖတ်ဖတ် မရိုးတဲ့စာအုပ်တွေမို့ Stella နဲ့ ယောင်းတို့ အကြိုက်တူလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဆို နောက်တစ်ပတ်ကြမှ စာအုပ်တွေနဲ့ ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်။
နှလုံးသားကို တိုကျရိုကျထိမှနျစတေဲ့ အရေးအသားတှမေို့ တသသစှဲကနျြစမှောပါ 😇
ဒီတဈပတျရုံးပိတျရကျမှာ ဘယျမှမသှားဘူး အေးအေးဆေးဆေး အိမျမှာပဲနမေယျဆိုတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ စာအုပျအညှနျးလေးအလှညျ့ ပွနျရောကျလာပါပွီနျော။ အခု Stella ညှနျးပေးမယျ့ စာအုပျလေးတှကေ ဖတျပွီးရငျ တသသဖွဈနရေစမေယျ့ လကျရာတှမေို့ ဖုနျးလေးတှေ နှဈရကျလောကျခပြွီး စာအုပျကမ်ဘာထဲ ဝငျကွညျ့လိုကျကွပါစို့…
(၁) ရငျထဲကဆောငျးရာသီ – မငျးလူ
ဒီစာအုပျကတော့ ဆရာမငျးလူရဲ့ လကျရာတှထေဲမှာ Stella အတှကျ ရငျထဲအထိဆုံးပါ။ ငယျဘဝက နာကွညျးခကျြတှကွေောငျ့ ဘဝကိုအမွငျ့ဆုံးရောကျအောငျ ကွိုးစားနတေဲ့ ခငျခိုငျ နဲ့ လူရိုးလူဖွောငျ့ ခပျအေးအေးနခေငျြသူ ငွိမျးမောငျ တို့လငျမယား။ ခငျခိုငျက နိုငျငံခွားပညာတျောသငျသှားခါနီးမှာ ကိုယျဝနျရှိလာလို့ ပညာတျောသငျကို စှနျ့လှတျလိုကျရပါတယျ။ မှေးလာတဲ့ သားမောငျကလညျး ဉာဏျရညျမမီတဲ့ ကလေးဖွဈနပွေနျတယျ။ သူတို့မိသားစုကွားမှာ ဘယျလိုအခွအေနတှေေ ဖွဈလာမလဲ ၊ ခငျခိုငျကရော သားမောငျအတှကျ သူ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှကေို အဆုံးရှုံးခံမှာလား ၊ ဉာဏျရညျမဖှံ့ဖွိုးတဲ့ ကလေးတဈယောကျကို ဘယျလိုပြိုးထောငျမှာလဲ စတာတှကေို ဆရာမငျးလူက “ရငျထဲကဆောငျးရာသီ” မှာ ကလောငျသားထကျထကျနဲ့ သရုပျဖျောထားပါတယျ။
(၂) မအိမျကံ – ခငျခငျထူး
စဖတျထဲက Stella လကျကမခနြိုငျအောငျ စှဲခဲ့တဲ့စာအုပျပါ။ အခုထကျထိလညျး ဖတျတိုငျးကွိုကျတုနျးပါပဲ။ စာအုပျက အနညျးငယျထူတာမို့ စာဖတျနှေးတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ အခြိနျယူဖတျရမယျထငျပါတယျ။ ဖကျစိမျးကှမျးတောငျကိုငျဖွဈခငျြလှနျးသူ ဇောငျခမျြးကုနျးရှာက မိနျးမခြော မိနျးမလှ မအိမျကံရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျးကို ဒီဝတ်ထုမှာဖတျရမှာပါ။ ခဈြစရာကြေးရှာဓလတှေ့ေ၊ ရှေးက ကှမျးတောငျကိုငျရှေးတဲ့အခါမှာ ထားရှိတဲ့ စံတှေ၊ ဂပြနျခတျေနိုငျငံရေးအခွအေနတှေအေကွောငျးကို ထဲထဲဝငျဝငျလလေ့ာနိုငျမယျ့ ဆရာမခငျခငျထူးရဲ့အပွောငျမွောကျဆုံးလကျရာတဈခုဖွဈပါတယျ။
Related article >>> မိနျးကလေးတိုငျးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ စာအုပျ (၄) အုပျ
(၃) ပနျးစကား – မစန်ဒာ
ကွှေ…တဈပတျလြှိုဆံထုံး၊ မာနရိပျကငျးတဲ့ မကျြဝနျးညိုညို၊ အေးခမျြးငွိမျသကျတဲ့အသှငျနဲ့ ကွှေ။ သူ(မ)ဘဝရဲ့ တဈဦးတညျးသော ခငျတှယျစရာ ကိုလေး။ လြှို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ ကွှေ။ ဒီ ကွှဆေိုတဲ့ မိနျးကလေးကိုမှ ခဈြမိတဲ့ စကျမှုတက်ကသိုလျကြောငျးသား မောငျမောငျ။ ကွှဘေ့ဝမှာ ဘယျလိုလြှို့ဝှကျခကျြတှရှေိနလေဲ၊ မောငျမောငျကကော ကွှကေို့ အိမျမကျဆိုးတှကေနေ ကယျတငျနိုငျမှာလား၊ ကိုလေးဆိုတာကကော ဘယျသူလဲ ? ရယျမောစရာတှရေော ရငျမောစရာတှရေောကိုပါ ဆရာမ မစန်ဒာရဲ့ဟနျအတိုငျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးထားတာဖွဈလို့ “ပနျးစကား” ကို ယောငျးတို့အကွိုကျတှမှေ့ာပါ။
Related article >>> ဇာတျလမျးကောငျး ကွိုကျသူတှအေတှကျ “လရဲ့အောကျဘကျမိုငျအဝေးမှာ” ဝတ်ထု
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ဒီတဈပတျအတှကျ နှဈသကျရာစာအုပျလေးတှေ ရှေးပွီးဖတျလို့ရလောကျပွီပေါ့နျော။ Stella ရှေးပေးထားတဲ့ စာအုပျတှကေ Stella ကိုယျတိုငျဘယျနှခေါကျဖတျဖတျ မရိုးတဲ့စာအုပျတှမေို့ Stella နဲ့ ယောငျးတို့ အကွိုကျတူလောကျမယျထငျပါတယျ။ ဒါဆို နောကျတဈပတျကွမှ စာအုပျတှနေဲ့ ပွနျတှကွေ့တာပေါ့နျော။
Tagged Art, authors, Book, Book Club, Book Reviews, book worm, good read, Knowledge, Read, writers
Posted on April 21, 2018 July 25, 2018 Author Miyuki
ဒီစာအုပ် ၂ အုပ်ကိုတော့ ကျိန်းသေပေါက် လက်တို့ပါရစေ